musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Vanhu vanosvika zana vari kutya kuvharirwa mumadhaka ekuCanada
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vanhu vanosvika zana vari kutyirwa kuti vakavharirwa mumavhu ekuCanada.
Emergency rescue officer vakati paive nemotokari dzinosvika makumi mashanu dzakavharirwa pakati peminda miviri yemarara mumugwagwa mukuru, paine vanhu vangangoita vaviri kusvika vatatu mune imwe neimwe.
Kukoromoka kwevhu muBritish Columbia yeCanada kwakatevera rinopfuura zuva rimwe remvura zhinji.
Vashandi vekutsvaga nekununura vanga vachiri kuyedza kuongorora kukuvadzwa kubva kumavhu nemusi weMuvhuro.
Vakuru vanga vasati vava nechokwadi chekuti pakanga paine vamwe vanhu nemotokari vakashaika.
Kukoromoka kukuru kwevhu kwakarova Highway 7 pedyo netaundi duku reAgassiz kumaodzanyemba kweCanada. British Columbia mudunhu, zvichitevera kunaya kwemvura zhinji inopfuura zuva.
Vanhu vangangosvika zana vaityirwa kuvharirwa husiku pakati pemarara mumugwagwa mukuru wekuCanada mushure mekunge mvura yanaya isingamirire yakonzera mafashamo nemadhaka nezuro. Kununura kwaizotanga kunze kwayedza.
Sekureva kwevakuru vekuCanada vekununura emergency, pakanga paine mota dzinosvika makumi mashanu dzakavharirwa pakati peminda miviri yemarara mumugwagwa mukuru mu. British Columbia, ine vanhu vangangosvika vaviri kusvika vatatu mune imwe neimwe.
Vashandi vekutsvagisa nekununura vanga vachiri kuyedza kuongorora kukuvara kubva pakakoromoka nemusi weMuvhuro - nevedunhu. Kutsvaga uye Kununura Kwemudhorobha Inorema (HUSAR) boka rinoratidza kuti harina kukwanisa kuona mamiriro ezvinhu nehusiku hwose.
"Chinoomesa mamiriro ezvinhu aya ndechekuti tine masiraidhi maviri paHighway 7 uye tine vanhu vanga vakavharirwa mumarara ... uye vamwe vanunurwa," HUSAR Team Director David Boone akadaro.
Akawedzera kuti bazi rezvemoto redhorobha rakatotora vanhu vanosvika gumi nevaviri vaive vakavharirwa mumotokari dzavo, vamwe vaviri vakanunurwa kumwewo.
Achiona kuti vakuru vakuru vanga vasati vave nechokwadi chekuti pakanga paine vamwe vanhu nemotokari vakashaika, Boone akati zviremera "zvichiri mapofu pazere dambudziko." Pamusoro pekushaikwa kwechiedza, kugadzikana kwepasi uye nyaya dzakatenderedza tambo dzemagetsi zviri kunetsawo kuedza kwekununura. Kumwe ongororo nezve "nzvimbo dzakanakisa dzekuwana" dzechikwata dzinofanira kumirira kusvika masikati, akawedzera.
Maererano nemishumo yerunhare kubva kuvatyairi, “chaizvoizvo vaigona kunzwa vachiridza mhururu nokushevedzera kuti vabatsirwe,” zvichireva kuti “pamwe paive nemotokari dzinosvika mazana maviri, mazana matatu dzakamiswa, dzakamirira kugadziridzwa.